Sirta ka dambeysa bandhigiisa cajiibka ah ee Liverpool, xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta & dhowr arrimood kale uu ka hadlay Diogo Jota – Gool FM
(Liverpool) 04 Dis 2021. Xiddiga Liverpool ee Diogo Jota ayaa daaga ka qaaday sirta ka dambeysa bandhigiisa deg-dega ah ee kooxda Reds, xilli uu sidoo kale sheegay in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Cristiano Ronaldo uu tusaale u yahay caalamka kubadda cagta.
Diogo Jota ayaa ciyaaray kulamadii la soo dhaafay isaga oo xiran maaliyada Liverpool, wuxuuna noqday xiddigii ugu horeeyay ee taariikhda Reds goolal ka dhaliya dhamaan kulamadiisii ​​ugu horeeyay ee garoonka Anfield, wuxuuna dhowr dhibcood ku hoggaamiyay kooxdiisa.
Xiddiga reer Portugal iyo kooxda Liverpool ee Diogo Jota ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Markii aad ku biirto koox cusub, waxaa muhiim ah inaad yeelato maskax furan oo aad kula qabsan karto sida ugu dhaqsaha badan. Waan ku biiray xilli ciyaareedkiina wuu bilaabmay, aniga ayayna igu ahayd inaan kooxda si toos ah u galo oo aanan ka habsaamin, tanina waxaan ku sameeyay caawinta Jürgen Klopp.”
“Klopp waa tababare cajiib ah oo daryeela dhamaan ciyaartoydiisa, markii ugu horeysay ee aan imid, waan la hadlay isaga wuxuuna iigu sharaxay si faahfaahsan sida ay kooxdani u shaqeyso, kaddib markii aan la kulmay Klopp, aniga ayay igu xirneyd inaan isku dayo, oo aan Barto, isla markana aan u cadeeyo tababaraha inaan ahay laacib muhiim ku ah garoonka dhexdiisa.”
“Liverpool waxa ay haysataa koox weyn, kabtan Henderson waxa uu ii ahaa shaqsi muhiim ii ah, waxa uu si toos ah iigu soo dhoweeyay kooxda markii aan ku biiray waxana uu iga caawiyay wax badan.”
Diogo Jota ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay ka hadlida xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta, wuxuuna yiri:
“Cristiano Ronaldo waa midka aan kaga daydo kubadda cagta. waxaan ku daawaday Euro 2004, wuxuu jiray 19 sano, laakiin wuxuu ku ciyaarayay tayo sare, Kadib wuxuu aaday United iyo Real Madrid, sida ay sheegaan dhalinyarada Portugal, waa Tusaalaheena ugu weyn ee kubadda cagta.”